सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला -
अर्थ राजनीति विविध
२९ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:३८ December 15, 2019 उधाेगिLeaveaComment on सुकुम्बासी विष्णु पौडेलले कसरी ठडाए भैंसेपाटीमा करोडौंको यो बंगला
राजनीति भन्ने जिनिस नै यस्तै । यही आडमा हिजो हात्तीछाप चप्पल पड्काउदै शहर छिरेका र राजनीतिमा होमिएकाहरु आज अर्बौ सम्पत्तिका मालिक बन्न सफल भएका छन् ।
अहिले चर्चा र बहसको बिषय बनिरहेको छ बालुवाटारको ‘आठ आना’ जग्गा । यो सरकारी जग्गा कीर्ते गरी पौडेलले आफ्ना पुत्र नविन पौडेलको नाममा पारिएको छ । पचासका दशकसम्म सुकुम्वासी भनिएका विष्णु पौडेल एक दशकमा करोडपति र अर्कौ दशकमा अर्बौको सम्पति थुपारिसकेकका छन् । यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ? अरुलाई लाग्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा नेताहरुलाई चाहिँ लाग्ने कि नलाग्ने ?
प्रंसग हो ०५२ सालको त्यो समयसम्म पौडेल सुकुम्वासी थिए वा रहेछन् । उनले त्यसबेला सुकुम्वासी आयोगमा आफुले दिएको निवेदन र सो अुनसार सुकुम्बासीका नाममा जग्गा प्राप्ती गरेको विवरण सरकारी निकायमा भेट्न पाइन्छ । सो समयमा उनले सुकुम्वासीका नाममा १८ धुर जमिन प्राप्त गरेका बिवरण उनकै गृहजिल्ला रुपन्देहीको मालपोत कार्यालयमा डढ्टा पल्टाउने हो भने भेटिन्छ ।
पौडेलले २०५२ साल असोज १९ गते वुटवलको दीपनगगरको कित्ता नम्वर २९ बाट १५ र कित्तानं ६४ बाट ३ गरी १८ धुर जमिन हातपारेका थिए । यो जमिन मूलराजमार्गभन्दा सयमिटरमात्र दूरीमा थियो । अर्थात उनले त्यसबेला राज्यको सुकुम्वासी नागरिक बनेर यो जमिन पाएका देखिन्छ ।
आज उनी करोडपति बनेका छन् । भैसेपाटीमा मात्र पौडेलको करोडौंको बंगला छ । झट्ट हेर्दा यो कुनै उद्योगी वा व्यापारीको झैं लाग्छ । करोडौं माथिको यो बंगलाले वप्रश्न उठाउँछ केही वर्ष अघिसम्म सुकुम्बासी रहेका पौडेल कसरी छोटो समयमै अर्वौका मालिक बने ? यसको छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? कर्मचारीको मात्र सम्पत्ति खोजविन हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर जेल जान्छन । के नेता हुँदा उनीहरुका जतिसुकै अनियमिततामा पनि सात खत माफ हुने हो ?
पौडेलको हैसियत भने सुकुम्वासी हुने थिएन । यतिबेला उनी आफै भनिरहेका छन् –स्याङजामा निकै राम्रो हैसियतको परिवार हो उनको । तर मनचाहिँ सुकुम्वासी भएछ र उनले त्यस्तो जमिन लिए र त्यसमा एकतले घर पनि बनाएका थिए । पछि बेचेको कुरा सार्वजनिक भयो । उनको त्यो घरजग्गा पवित्रा थापा नामगरेकी महिलाले खरिद गरेको कुरा रिपोर्ट सार्वजानिक भइसकेको छ ।
त्यो जग्गा पनि उनका छोराको नाममा थियो जो यतिबेला चर्चामा आएको बालुवाटारको आठ आनापनि छोराकै नाममा छ ।
तर, उनले सम्पती बिवरणमा भने यस्तो देखाएका छन् । छोरा नवीन पौडेलको नाममा ललितपुर कार्यविनायक नगरपालिका–२ मा नौ आना एक पैसा दुई दाम जग्गामा निर्माण भएको घर छ । मन्त्री पौडेलकै छोरा नवीनको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा आठ आना जग्गा छ । मन्त्री पौडेलसँग १६ तोला सुन छ । पौडेलको एभरेस्ट बैंकमा २१ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । छोरा नवीनको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पाँच हजार सात सय, यती डेभलपमेन्ट बैंकमा एक हजार, ग्लोबल आइएमई बैंकमा ३३ हजार, कमनवेल्थ बैंक अफ अस्ट्ेरलियामा ६ सय १४ अस्ट्ेरलियन डलर छ । पौडलेका छोरा नवीन र बुहारी प्रमिता अधिकारी अहिले अस्ट्ेरलियामा छन् । बुहारी नेपाली दूतावास अस्ट्रेलियामा शाखा अधिकृत छिन् । बुहारी अधिकारीको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकमा ३३ हजार, कमनवेल्थ बैंक अफ अस्ट्ेरलियामा १३ हजार अस्ट्ेरलियन डलर बचत छ । अर्थमन्त्री पौडेलकी श्रीमती दोमायाको नाममा एनडिइपी बैंकको तीन कित्ता, छोरा नवीनको नाममा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकमा पाँच सय २२ कित्ता, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पाँच सय २२ कित्ता, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजमा १२ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर छ । नवीनले दुई लाख चुक्ता पुँजी भएको तिलोत्तमा होल्डिङ कम्पनी स्थापना गरेका छन् । तर, सञ्चालनमा आएको छैन । पौडेलले माइलस्टोन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५० हजार र गौतम बुद्ध स्वास्थ्य सेवा सहकारी बुटवलमा २५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । छोरा नवीनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २० लाख १६ हजार ओभर ड्राफ्ट ऋण लिएका छन् भने पौडेल स्वयंले बुटवलका सतिश कसौधनबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । नवीनले अस्ट्ेरलियन डलर २४ हजार पाँच सयमा कार किनेका छन् ।
दु:खी /गरीबका सारथि समाजसेवी निरन्जन कुमार श्रेष्ठ
कहाँ कहाँ छन् विश्वकै सबैभन्दा १० ठुला हिन्दु मन्दिरहरु ?
शान्ति मिसन नगई यूएनको तक्मा
२१ पुष २०७६, सोमबार ०४:०२ January 6, 2020 उधाेगि
तरकारी खेतीबाट आफ्नै देशमा पैसा फलाउँदै
९ मंसिर २०७६, सोमबार ०९:३९ November 25, 2019 उधाेगि
जीवनका तीन पक्ष :- लर्निङ, अर्निङ एन्ड गिभिङ
२३ मंसिर २०७६, सोमबार ०८:३३ December 9, 2019 उधाेगि